ဟိုင်နန်ကျွန်းကို ဝင်တိုက်နေတဲ့ မုန်တိုင်း NALGAE « MMWeather Information BLOG
« ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည့် NALGAE အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NALGAE ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် ဗီယက်နန်အလယ်ပိုင်းသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိ »
ဟိုင်နန်ကျွန်းကို ဝင်တိုက်နေတဲ့ မုန်တိုင်း NALGAE
By mmweather.ygn, on October 4th, 2011
Komsan Suwan-ampha from Chiang Mai’s Disaster Prevention and Mitigation office warned of the growing risk of landslides throughout the region. “In an emergency or ifadisaster is clearly approaching, people must rush to safe places or gather at temples or schools,” he said. Link
Thailand’s Department of Disaster Prevention and Mitigation increased the flood toll from last Thursday’s 136 to 166, but provided no additional details over the extra 30 deaths. link
ဒီနေ့မနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီမှာ ရတဲ့ ဂြိုလ်တုပုံအရ မုန်တိုင်းဗဟိုဟာ တုံကင်ပင်လယ်ကွေ့ပင်လယ်ပြင်ကို စတင် ဆင်းသက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Peak Wind Gusts: 95 kph (50 kts) Present Movement: WNW @ 22 kph (12 kts)
လက်ရှိမုန်တိုင်း အခြေအနေ ကောက်နှုတ်ချက်
မုန်တိုင်း အရွယ်အစား ၇၂ဝ ကီလိုမီတာ (၄၇၇ မိုင်ခန့်)
မုန်တိုင်းဦးတည်ရာ – ဟိုင်နန်ကျွန်းတောင်ပိုင်းနှင့် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း
လေတိုက်နှုန်း – ၇၅-၉၅ ကီလိုမီတာ (တစ်နာရီ ၄၅ မိုင်မှ မိုင် ၆ဝ)
မုန်တိုင်းဒီလှိုင်း အမြင့် – ဗဟိုတွင် ၂၄ ပေ
Typhoon2000 မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အရ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဟိုင်န်ကျွန်းမှ ထွက်ခွာပြီး ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဆက်လက်ရွေ့လျားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အောက်တိုဘာ-၆ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီမှာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် အားလျော့သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ထိုင်း-လာအို နယ်စပ်အနီးမှာ လုံးဝ အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ (အောက်ပုံ)
WEDNESDAY MORNING: Just barelyaTropical Storm (TS) as it moves away from Southern Hainan…heading towards Northern Vietnam [8AM OCT 05: 18.2N 108.3E @ 65kph].
FRIDAY MORNING: Dissipates along the Laos-Thailand Border [8AM OCT 07: 16.6N 104.6E @ 35kph]. မုန်တိုင်း NALGAE အရှိန်ကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၃း၃ဝ နာရီအထိ မိုးရွာသွန်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းပုံ
check updated information by clicking on this link please
မိုးရေချိန်-ရေကြီးမှု ခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း 22W, NALGAE, QUIEL, ဗီယက်နန်, မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း, တောင်တရုတ်ပင်လယ် « ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည့် NALGAE အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NALGAE ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် ဗီယက်နန်အလယ်ပိုင်းသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိ »
1 comment to ဟိုင်နန်ကျွန်းကို ဝင်တိုက်နေတဲ့ မုန်တိုင်း NALGAE
Log in to Reply	Thailand’s worst monsoon floods in decades have killed 224 people and affected three quarters of the country, including part of the ancient city of Ayutthaya, according to officials.
Two months of flooding have inundated 58 of Thailand’s 77 provinces — with 25 still severely affected — and damaged the homes or livelihoods of millions of people, according to the government.
Wat Chaiwatthanaram, one of Ayutthaya’s best known temples, has been closed to visitors afteramakeshift dyke was breached at the former capital,apopular tourist destination north of Bangkok.
“The water level inside the temple grounds is now 1.50 metres,” said Supoj Prommanoch, head of the Fine Arts Office in Ayutthaya, located north of the capital Bangkok.
« ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည့် NALGAE အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NALGAE ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် ဗီယက်နန်အလယ်ပိုင်းသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum